गोरखापत्रमा किरात समुदायका २५ वटै भाषा समेट्न यायोक्खाको माग «
गोरखापत्रमा किरात समुदायका २५ वटै भाषा समेट्न यायोक्खाको माग
प्रकाशित मिति : 29 August, 2019 11:45 pm
काठमाडौं । किरात राई यायोक्खाले गोरखापत्र दैनिकको भाषा पृष्ठमा राई समुदायको २५ वटै भाषा समेटेर प्रकाशन गर्न माग गरेकाे छ ।
यायोक्खाले बुधबार आयोजना गरेको भाषिक संस्थाको प्रतिनिधिहरुको बैठकले गोरखापत्र संस्थानसँग माग गर्ने निर्णय भएको हो । गोरखापत्रले आगामी महिनादेखि भाषिक बाहुल्यता रहेको प्रदेशबाटै भाषिक पृष्ठ प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सोही सम्बन्धमा यायोक्खामा आयोजित बैठकले १ नम्बर प्रदेशमा राई समुदायको २५ वटै भाषाबाट भाषिक पृष्ठ प्रकाशन गर्न माग गर्ने निर्णय भएको यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राईले बताए । हाल ३६ वटा भाषामध्ये वान्तावा र राई भाषाको रुपमा चाम्लिङ, कोयी, थुलुङ, कुलुङ, बाहिङ, साम्पाङ, दुमी, वाम्बुले गरी ८ वटा राई भाषाबाट पृष्ठ प्रकाशन हुँदै आएको छ ।
असोज ३ गतेबाट भाषिक पृष्ठ सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रकाशन हुने गोरखापत्रमा प्रकाशन हुने नीति बनेको छ । भाषिक पृष्ठ प्रकाशन र शिफारिसको लागि परशुराम तामाङको संयोजकत्वमा डा. डम्बर चेम्जोङ, डा. तरामणि राईको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएर सुझाव संकलन गर्दै आएको छ ।
कार्यदलले प्रदेश १ र २ को लागि भाषिक पृष्ठ प्रकाशनको लागि सिफारिश गर्दैछ । राई समुदायले २५ भाषा प्रयोगमा आइरहेको हुँदा प्रदेशबाट प्रकाशन हुँदा सबै राई भाषालाई पृष्ठ माग गर्ने यायोक्खाको महासचिव जनक राईले बताए ।
बैठकमा वान्तावा, चाम्लिङ, साम्पाङ, दुमी, पुमा, मेवाहाङ, कोयी, खालिङ लगायत भाषिक संगठनका प्रतिनिधि, यायोक्खा उपाध्यक्ष टिकासरी राई, सचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायतकाे सहभागिता थियाे ।